SAM ကို-ဗြိတိန် - Wood က & သံ vs ဗီနိုင်း
ဗီနိုင်း VS Wood & သံ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ » Wood က & သံ vs ဗီနိုင်း
သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်မွေးမြူရေးခြံ decorating သည့်အခါဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်: အဘယျသို့ပစ္စည်းခြံစည်းရိုးကိုရွေးချယ်သလဲ? သစ်သား, သံ, ဒါမှမဟုတ်ဗီနိုင်း? ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့ကိုငါဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ဤသုံးပါးပစ္စည်းများတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလှအပ: ဗီနိုင်း & GT; သံ & GT; သစ်သား
ဒါဟာအားလုံးကိုသင်လိုချင်တဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ သငျသညျဘို့သံ၏ဂန္ကြည့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, သံခြံစည်းရိုးကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ preference ကိုအညီသင့်ရဲ့သစ်သားခြံစည်းရိုးပေါ်ဆေးထိုးခြင်းမှရှေးခယျြနိုငျသညျ, ဒါပေမဲ့ဒီနွမ်းရှောင်ရှားရန်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုထိခိုက်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ သငျသညျသစ်သား၏အသွင်အပြင်တူတဲ့လိုပါကဗီနိုင်းရွေးကောက်သဖြင့်, ဗီနိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအတွက်ကောင်းတစ်ဦးလျောက်ပတ်သည်နှင့်လည်းညှိုးနွမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ရေရှည်မှာထဲမှာ, သံချေးမည်ထင်း corroded လိမ့်မည်။
တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ: သံ & GT; ဗီနိုင်း & GT; သစ်သား
သံဤကဏ္ဍတွင်အနိုင်ရ။ သတ္တုခြောအလေးချိန်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုတွေအများကြီးကိုဆီးတားနိုင်။ သစ်သားပစ္စည်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုအတော်လေးညံ့ဖျင်းနေသည်။ ဗီနိုင်းလည်းကောင်းသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သံ၏ခွန်အားမကိုက်ညီပါဘူး။ သို့သော်နေသမျှကာလပတ်လုံးကအကြမ်းဖက်သက်ရောက်မှုမယ့်အတိုင်း, ဗီနိုင်းပစ္စည်းကိုချိုးဖျက်မည်မဟုတ်, ကသင့်ရဲ့ခြံထဲမှာသို့မဟုတ်မွေးမြူရေးခြံခြံစည်းရိုးများအတွက်သံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ပါပဲ။
သီးသန့်လုံခြုံရေးအဆင့်ကို: ဗီနိုင်း & GT; သံ & GT; သစ်သား
တချို့ကအိမ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဘေးလွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသကိုဖန်တီးရန်ခြံစည်းရိုး install လုပ်ပါ။ တစ်ခု All-သတ္တုခြံစည်းရိုးသင့်ရဲ့ဟင်းလင်းပြင်မသက်မသာခံစားမိစေပါနဲ့ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ သစ်သားခြံစည်းရိုး၏အစွမ်းသတ္တိကိုအလွန်ဆင်းရဲသည်နှင့်လူတွေကိုမလုံခြုံမှုတစ်အသိပေးလိမ့်မည်။ သစ်သားခြံစည်းရိုးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနိမ့်အစွမ်းသတ္တိ၏မလုံခြုံစေနိုင်ပါတယ်။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏အားသာချက်များပင် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စတိုင်ကသင်၏လိုအပ်ချက်များကို လိုက်. နိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအခြို့သောကွက်လပ်ထားခဲ့ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့ပြင်ပအာကာသအချို့ privacy ကိုဗီနိုင်းပေးရသည်ဆိုပါကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြာရှည်ခံမှု: ဗီနိုင်း & GT; သံ & GT; သစ်သား
ရေရှည်ကြာရှည်ခံမှုစဉ်းစားသည့်အခါဗီနိုင်းနှင့်ဘို့သံသင်တို့၏ခိုင်ခံ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဗီနိုင်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလည်းညှိုးနွမ်းခြင်းနှင့်အစွန်းအထင်းမှလျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။ စီရင်သံချေးကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်တိုင်း repainted ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သံချေးအစက်အပြောက်ထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။ သစ်သားခြံစည်းရိုးသာမှန်မှန်ထိန်းသိမ်းထား, ဒါပေမယ့်လည်းရေနှင့်ခွတှစေားအားဖြင့်ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်ကြသည်မဟုတ်။
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခ: သစ်သား> ဗီနိုင်း> သံ
နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ဗီနိုင်းပစ္စည်းများ၏ခြံစည်းရိုးသင့်ရဲ့အလှဆင်ဝင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကြောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြပြီးလိုအပ်အဖြစ်ခြံစည်းရိုးကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာငါတို့ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ကျနော်တို့စတိုင်များနှငျ့သငျရှေးခယျြဖို့အတှကျအရောင်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာတွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတိုင်ပင်ဖို့ကြိုဆိုကြသည်။